I-Laurence Iinqwelomoya Zomoya Zizisa ingqokelela eyiVumayo yomntu wale mihla
IVeki yeFashoni ye-ARISE I-2018: I-Laurence Airline Presents Iqoqo eliVulekileyo loMntu wale mihla
Aprili 2, 2018
IVeki yeFashoni ye-ARISE I-2018: I-Abaya Lagos ibonisa iMiboniso ye-AW18 ye-AWXNUMX enomusa yeTagged
AIimpawu ezintathu zabasetyhini babonise ingqokelela yabo, bazalwa ngu-Abidjan, ilebhile esekwe eParis Inqwelo moya yeLaurence yasekwa ngu U-Laurence Chauvin-Buthaud yeza ne-testosterone efunekayo kakhulu kwindawo yokubaleka ngomhla 1 ngeVeki yeFashoni yeVeki ye-2018.
I-Laurence Airline, eyaziwa nge-aesthetics yayo epholileyo, ebekwe ngasemva kodwa eyothusayo, ayizange yonganyelwe ngoogxa babo ababhinqileyo bebona njengoko bekulapho kuphela ilebhile yokunxiba iimpahla zobusuku. Uhlobo oluchongwe kwimigangatho yanamhlanje ngokuqokelela ingqokelela equlathe itripris, iqhosha phantsi ihempe ngaphambili kunye neebhlukhwe ezimbethiweyo, imivimbo kunye noyilo lweentyatyambo kunye nolunye uhlobo lokuprinta, olugqibeleleyo lendoda enesibindi kwaye ekude nolondolozo.
Ingqokelela enemibala ye-SS18 yeyomntu wanamhla wale mihla ofuna ukuhlala enyanisekile kwiingcambu zakhe ngelixa ezihlala evulekile kwiinkcubeko ezahlukeneyo eziphembelele ukukhula kwakhe. Kukwabandakanywa nokuqokelelwa kukho iminqwazi yotshani ebomvu ebomvu kunye nokukhanya okuqaqambileyo okulula ukuthwala okuhamba okuye kongeza kwimibono yokuqokelelwa kunye nesibongozo se cosmopolitan.
Ukufota: Imifanekiso ebonakalayo kunye nemifanekiso
#mkhulufrican Abaqulunqi be-abudjan ingqokelela yase-african abaqulunqi be-african Imenswear yase-african afw AFW 2018 afw2018 vuka iveki yefashoni IVeki yeFashoni yeVeki ka-2018 aw18 Okufumaneka abayili bonxweme beendlovu uyilo lwakutsha nje lwase-african Inqwelo moya yeLaurence U-Laurence Chauvin-Buthaud izitayile zase-Nigerian
titi Dokubo Aprili 2, 2018
I-ANKARA I-Jumpsuits Ngaba Awunakuchazwa ukuba liLungu leNtombazana